Warar - Qaar ka mid ah daab laalaab ayaa adeegsada ma ogid
Waan ognahay inay jiraan qaabab badan oo ah caleemaha goynta cawska, sidaa darteed aad bay noogu adag tahay xulashaddu. Sidee loo doortaa caleemaha goynta cawska? Sidee loo hagaajiyaa daab cawska? Iyo sida loo isticmaalo loona ilaaliyo caleemaha goynta cawska? Tifatiraha soo socda ayaa ku soo bandhigi doona.
Sidee loo hagaajiyaa daab cawska?
Markii la hagaajinayo qalabka daabka cawska, waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo furka, loo rogo 1 / 4-3 / 4 leexo, lagu xoqdo lowska, la maareeyo dhaqeyaha, haddii dhaqe dhaqaajin karo u dhaqaaqi karo, ka dib adkee lowska oo mar kale hubi suufka Haddii daabku dhaqaaqo , haddii furku aad u adag yahay, daabku ma dhaqaaqi doono. Ka dib markii wax walba la rakibo, dariiqa tijaabada, daabku wuxuu soconayaa hal daqiiqo, ku taab fareeji gacantaada, waa kuleyl ama aad ayuu u kulul yahay, nalka buraashka qallajiyaha ayaa tilmaamaya in furku aad u adag yahay, fadlan mar kale habee.
Shaqo wanaagsan ka samee dayactirka aaladaha goynta cawska
Mashiinnada jarista dhirta orchard-ka ee soo jireenka ah ayaan la jaanqaadi karin foomka abuurista jirrashada hadda jirta, iyo bur buriyaha cusub burji magaabay magaabay waxay si buuxda u buuxin kartaa baahiyaha hawlgalka jarista jardiinada hadda jirta. U adeegsiga burcadaha jarjarada howlaha jarista dhirta waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa waxtarka shaqada. Mashiinka burcadka lagu gooyo ayaa lagu hayn karaa dhulka si looga hortago nabaad-guurka carrada, qurxinta deegaanka, u xafidaan biyaha una soo sheegaan qoyaanka, isla markaana u kordhiyaan walxaha dabiiciga ah ee carrada.
Sida loo isticmaalo buraashka goysyada barkadaha si nabdoon
A. Isticmaal shidaal tayo sare leh iyo saliidda mashiinka, oo hubi in isku-darka isku-darka balka goynta buraashka (25: 1 ama 50: 1).
B. Si joogto ah (25 saacadood) u hubi oo u beddelo miiraha hawada iyo dhalada dhimbiilaha.
J Kadib markaad la shaqeysid haanta saliida, waa inaad nasataa 10 daqiiqo, oo nadiifi goomaatada dabacsan ee mashiinka shaqo kasta kadib si loo hubiyo kala-baxa kuleylka.
D. Markaad keydinaysid, waa inaad jirka nadiifisaa, sii deysaa shidaalka isku qasan, nalka buraashka gooyuhu wuxuu gubi shidaalka ku jira uumiga, ka saar furka dhimbiilaha, ku dar 1-2ml oo saliid ah silsiladda, jihada bilowga 2-3 jeer, Ku rakib furka dhimbiilaha.
Dhererka qufulka naylon ee nalka galka burushka waa in la xakameeyo (= 15cm). Markaad adeegsanaysid daabka nalka galka burushka, dheelitirka daabku waa in la hubiyaa, daabkiisana gariirka leh lama isticmaali karo.
(1) Xadhig-cawska jilicsan ee fudud in la gooyo.
(2) Ballaaran oo afar geesle ah - inta badan dhibaatooyinka adag ee jilicsan sida cawsduur.
(3) Rhombus blades-for canab, geedo yaryar, iyo kuwa adag.
Ku rakibida xadhig goynta cawska
Kala fur madaxa goynta, ka dibna soo bixi xuddunta meertada ah oo isku wareeji xarigga gooynta. Dhererka xarig goynta waa inuusan dheereyn, 10-15cm waa ku habboon yahay, ma sahlana in la garaaco, ma sahlana in la xakameeyo, iyo in si fudud loo jebiyo. Markaad rakibayso, ku xidho gunti ama madaxa goynta, oo ka soo bixi xadhigga dhinaca ka soo horjeedka ah, haddii kale xadhigga ayaa soo bixi doona inta hawshu socoto; dhererka xarig goynta labada dhinac waa inay isku mid ahaato, haddii kale fursadda goosashada waa la gaabin doonaa isku dheelitir la'aan. Xadhigga goynta cawsku wuxuu ku habboon yahay oo keliya jarista cawska yar yar, oo aad u qaro weyn, xitaa cawska duugga ah ee la jiiday, wuxuu u baahan yahay in lagu gooyo daab. Kuwa soo socdaa waa sida loo dabaylocaws jare xadhig jarid.
(1) Ka saar madaxa goynta, waxaa jira meel loogu talagalay xarigga goynta gudaha.
(2) Xadhig jarjar badhkeed, ku xoq meesha ay ku xidhan tahay xadhigga goos gooska, ka dibna dabeyl ka dhex dhig.
(3) Markay isqabqabsigu dhammaato, ka gudbi xadhigga gooynta geedaha jeex jeexa labada dhinac.
Xulashada daab cawskawaa mid aad muhiim u ah. Marar kala duwan iyo xulashada makiinada caws-dhige ee u dhigma, waa inaad doorataa midhaha saxa ah ee saxda ah. Intaa waxaa dheer, waxaan xusuusinayaa qof walba inaad doorato bladhka wax soosaarayaasha cabbirka. Hangzhou Zhengchida Sax Machinery Co., Ltd. ayaa hogaaminayasoo saaraha aaladaha mashiinada jardiinada ee Shiinaha Kusoo dhawow inaad iibsato.